Windows Movie Maker for Windows7~ mgkhainghtoo
23:45 မောင်ခိုင်ထူး No comments
Windows Movie Maker for Windows7v1.0 Build 6.5| 12 MB |
ဒီကောင်လေးကတော့ slideshow ပြုလုပ်ရာမှာ အခြားဆော့ဝဲလ်တွေကို အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ vista / xp များမှာ Microsoft ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Windows Movie Maker ကို အသုံးပြုသလို ကျနော်တို့windows7သမား များအတွက် သီးသန့် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Windows Movie Maker software လေးဖြစ် ပါတယ်. အထဲမှာပါဝင်တဲ့ effect တွေကလဲ ယနေ့ နာမည်ကြီး ဈေးကြီးပေးနေရတဲ့ slideshow software
များ အတိုင်း အရည်အသွေးမှီ slideshow တစ်ခွေကို လှလှပပ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကလဲ အရမ်းလွယ်ကူ တဲ့အတွက် windows7user များအနေနဲ့ မိမိတို့ စက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားသင့်ပါတယ်. 32-bit and 64-bit ( ၂ ) မျိုး စလုံးမှာ supports လုပ်ပါတယ်။
အသုံးပြုချင်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီမှာ download ယူနိုင်ပါတယ်...